Gonzalo Higuain “Barca Waxaa Ay U Ahayd Maalin Madoow” | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » Gonzalo Higuain “Barca Waxaa Ay U Ahayd Maalin Madoow”
Gonzalo Higuain “Barca Waxaa Ay U Ahayd Maalin Madoow”	Waxaa Qoray: Abbas Ali Hassan Taariikh: 5-April-2017
weeraryahanka kooxda Juventus Gonzalo Higuain ayaa aaminsan in Barcelona aysan u ahay maalin xun kulankii Paris ay la ciyaareen tartanka Champions league sidoo kale sheegay i aysan u baahneyn in lagu celiyo kulankaasi.
kooxda daafacnaysa horyaalka Seria A ayaa la ciyaari doonta Barca wareega sideed dhamaadka tartanka Champions league ka dib Barca markii ay lugta labaad Paris Saint-Germain si lama filaan ah uga soo tilaabsatay.
Barca aya lugta hore 4-0 guul daro ah kala soo kulantay PSG ka hor inta aysan 6-1 kaga badin garoonkeed camp Nou.
Balse Higuain ayaa ogsoon in ay Barca tahay koox nasiibkeeda aan la dhaliil san karin wuxuuna kooxdiisa ugu baaqay in ay diyaar garow xoogan u galaan kulanka ay la ciyaari doonaan Boluograna.
“Barcelona waxey u ahayd maalin xun kulankii Paris ay kusoo ciyaareen Balse waxaan ay heleen maalin kale, kubada cagta waxaa ay isku badalaysa si dag dag ah sidoo kale waxaa ay muuqdeen kuwa laga ciribtiray haatanne waxey joogaan sideed dhamaadka tartanka” ayuu u sheegay saxaafada Gonzalo Higuain.
Gonzalo Higuain ayaa ku raaxeystay sanadkii ugu horeeyey ee Juve uu u ciyaaray kaasoo 23-jeer shabaqa soo taabtay dhaman tartamada tan iyo markii uu kasoo dhaqaqay napoli.
29-sano jirkan u dhashay Argentina ayaa Juve u rajeeyay in ay guuleystaan lugta koowaad ee tartanka Champions league tan iyo sanadii 1996-dii.
“Waxaan rajeynaynaa in sanadkaan uu noqon doono sanadka ugu horeeya ee an guuleysano Champions league, waana sababta aan u imaaday halkaan, sidoo kale waxaan ku dagaalamynaa in aan qaadno sanadkeenii lixad oo xiriir ah horyaalja Seria A iyo Copa Italia.